Guul Hordhac ah oo laga gaaray Beelo ku Dagaalayey Deegaanka Kalabaray ee gobolka Mudug | Puntland Vision
Guul Hordhac ah oo laga gaaray Beelo ku Dagaalayey Deegaanka Kalabaray ee gobolka Mudug
Deegaanka kalabayr oo degmada Bursaalax ee gobolka Mudug u jira 8KM degmada Galdogobna u jira 38KM ayaa labo Beelood oo Colaadi ku dhexmartay waxaa laga gaaray Waan Waan hordhac ah.
Masuuliyiin isugu jira Maamulka degmada,Nabadoon iyo Culimadda Bursaalax oo ku baxay Coladaasi sidii loo qaboojin lahaa ayaa ku guulaystay inay kala qaadaan labada Ciidan ee Beelaha walaalaha.
Culimaa u diinka oo xalay ku dhaxay deegaankaasi ayaa saaka markale dib uga bilaabay waan waanta iyo kulamo labada dhinac ay la qaadaanayaan iyagoo ku qancinayey in laga Xaalo dhacdooyinkii hore kuwasoo shaydaan ka taliyey sida ay sheegeen culimadda.
Gudoomiyaha degmada Bursaalax iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay galab kasoo laabtay deegaanka dagaalku dhacay ayaa markale saaka Qorshuhu yahay inuu dib ugu laabto si goobjoog u ahaado Nabadaynta Beelaha walaalaha ah.
Wixii kasoo kordha kala soco Puntlandvision.com